Semalt बाट चार तरिकाले वेबसाइट स्क्रैपिंग बोट्स रोक्न सहयोग पुर्याउनेछ
वेबसाइट स्क्रैपिंग डेटा निकालन को लागि एक शक्तिशाली र व्यापक तरीका हो। दाहिने हातमा, यो जानकारीको संग्रह र वितरण स्वचालित रूपमा हुनेछ। तथापि, गलत हातमा, यो अनलाइन चोरीहरू र बौद्धिक गुणहरू चोरी र गैरकानुनी प्रतिस्पर्धा चोर्ने हुन सक्छ। तपाईले हानिकारक लग रहेको छ कि वेबसाइट स्क्रैपिंग पत्ता लगाउन र रोक्न निम्न विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
1. विश्लेषण औजार प्रयोग गर्नुहोस्:
एक विश्लेषण उपकरणले तपाईंलाई विश्लेषण गर्न मद्दत गर्नेछ कि वेब स्क्रैपिंग प्रक्रिया सुरक्षित छ वा छैन। यस उपकरणको साथ, तपाईं सजिलै संग संरचनात्मक वेब अनुरोध र यसको हेडर जानकारी जाँच गरेर साइट स्क्रैपिंग बटहरू पहिचान गर्न र ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ।
2. चुनौती चुनौती आधारित दृष्टिकोण:
यो एक व्यापक दृष्टिकोण हो जसले स्क्रैपिंग बट पत्ता लगाएको छ। यस सम्बन्धमा, तपाईं सक्रिय वेब घटकहरू प्रयोग गर्न र आगन्तुक व्यवहारको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, वेबसाइटको साथ उनको अन्तरक्रिया। तपाइँले जाभास्क्रिप्ट स्थापना गर्न वा कुकीजहरू सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ कि थाहा पाउनुहोस् कि वेबसाइट स्क्रैपिङ लायक वा होइन। तपाईं आफ्नो साइट को केहि अवांछित दर्शकहरुलाई ब्लक गर्न कोप्चाचा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
3. व्यवहारिक दृष्टिकोण लिनुहोस्:
व्यवहारिक दृष्टिकोणले एक साइटबाट अर्को स्थानबाट लिने बिस्तारहरू पत्ता लगाउँदछ र पहिचान गर्दछ। यो विधि प्रयोग गरेर, तपाइँ एक विशेष बटसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो साइटमा बहुमूल्य र उपयोगी छ भनेर निर्धारण गर्दछ। अधिकतर बटहरूले आफुलाई जाभास्क्रिप्ट, क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र एचटीएमएल जस्ता अभिभावक कार्यक्रमहरूमा लिङ्क गर्दछ। यदि ती बटहरू र तिनीहरूको विशेषताहरूको व्यवहारले आमाबाबुको व्यवहार र विशेषताहरूसँग समान हुँदैन भने, तपाईंले तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ।
4 - human resource management system project database service. रोबोट.txt प्रयोग गर्दै:
हामी रोबोट.txt प्रयोग गर्दछौं। यद्यपि, यस उपकरणले लामो रनमा वांछित परिणामहरू दिँदैन। यसले मात्र काम गर्दछ जब हामी यसलाई सिग्नलिंग खराब बुटहरूद्वारा सक्रिय गर्दछौं जुन तिनीहरू स्वागत गर्दैनन्।
हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि वेब स्क्रैपिंग सधैँ दुर्भावनापूर्ण वा हानिकारक छैन। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जब डेटा मालिकहरूले यो धेरै सम्भव व्यक्तिहरूको साथ साझेदारी गर्न चाहन्छन्। उदाहरणको लागि, विभिन्न सरकारी साइटहरू सामान्य जनताको लागि डेटा प्रदान गर्छन्। वैध स्क्रैपिंग को एक अन्य उदाहरण एग्रीक्लेटर साइटहरु या ब्लगहरु जस्तै यात्रा वेबसाइटहरु, होटल बुकिंग पोर्टलहरु, संगीत कार्यक्रम टिकटहरु र समाचार वेबसाइटहरु।